MX Linux: အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကိရိယာများဖြင့်လျင်မြန်။ ဖော်ရွေသော distro | Linux မှ
MX Linux - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကိရိယာများဖြင့်လျင်မြန်။ ဖော်ရွေသော distro
၏ပြည်ထောင်စု၏ antix နှင့်ရှေးဟောင်းအသိုင်းအဝိုင်း MEPISအလွန်ထင်ရှားသော MX Linux ကိုမွေးဖွားခဲ့သည် https://mxlinux.org/၏အခြေခံပေါ်မှာ, distro တစ်ခုချင်းစီ၏အကောင်းဆုံး tools များနှင့်အရည်အသွေးတွေကိုပါဝငျသော Debian တည်ငြိမ်မှု။ ၎င်းသည်အလတ်စားအလေးချိန်ရှိသော operating system တစ်ခုဖြစ်ပြီး XFCE ကဲ့သို့ပေါ့ပါးပြီးပေါ့ပါးသည့် desktop ကိုရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်မှု၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်ခိုင်ခံ့သောစွမ်းဆောင်ရည်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
မှတ်သားသင့်သည်မှာဤဖြန့်ဖြူးခြင်းသည် Debian ကိုအခြေခံထားသော်လည်း Sysvinit နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည် အများဆုံး updated အစားထိုး systemdအများကြီးအဘို့အရာကြီးစွာသောအားသာချက်ဖြစ်လာသည်။ အလားတူပင်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ လွယ်ကူသောသင်ကြားမှုမျဉ်းကွေး၊ ရပ်ကွက်ကျယ်နှင့်အသွင်အပြင်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ MX Linux ကိုအသုံးပြုသူအားလုံးအတွက်အခက်အခဲမရှိသောစနစ်အဖြစ်တင်ဆက်ထားသည်.
အဖွဲ့ MX Linux သူသည်သူ၏ distro ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးကို ၃ နှစ်ကြာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးရောက်ရှိရန်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်သည် MX-16 «သွင်ပြင်လက္ခဏာ» ငါတို့စမ်းသပ်ပြီးနှင့်သင်က၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများဆောင်ခဲ့ရမည်။
1 MX-16 « Metamorphosis »ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
2 MX-16 ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ။
2.1 MX-16 ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု
2.2 MX-16 «သွင်ပြင်လက္ခဏာများ» application များ
3 MX-16 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
4 MX Linux 16 «သှငျပွောငျးသှား»
MX-16 « Metamorphosis »ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
၎င်းသည်ပေါ့ပါးသော distro ဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်၍ တီထွင်ခဲ့သော MX Linux distro ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ပြီး Debian 8.6 'Jessie' ကိုအခြေခံသည်။ အမျိုးမျိုးသော antiX ဖြန့်ဝေမှုများမှအင်္ဂါရပ်များကို Xfce 4.12.2 ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ။ , 3.16-bit version အတွက် Linux kernel 32 နှင့် 4.7.0-bit version အတွက် Linux kernel 64 တပ်ဆင်ထားသည့်အပြင်။
MX-16 စနစ်၏အခြေစိုက်စခန်း၏«အသွင်ပြောင်း» AntiX သူ့အတွက် Warren Woodford အသုံးပြုသောအလုပ်နှင့်စိတ်ကူးများပါ ၀ င်သည် MEPIS စီမံကိန်း။ ဒီအပြင်, သူတို့ Backports နှင့်၎င်းတို့၏အပြင်ဘက်ဖြည့်စွက်ပါဝင်သည် အနားယူပါ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့။
ဤ distro သည် UEFI တပ်ဆင်မှုများအတွက်ကောင်းမွန်သော driver တပ်ဆင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်။
MX Apt အသိပေးချက်
၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောတည်ငြိမ်မှုရှိပြီးတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးမည်သည့်အသုံးပြုသူအတွက်မဆိုအလွန်ကောင်းမွန်သော Hardware အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသည်။
၎င်း၏ဖြန့်ချိသူများ၏အမြင်ရှုထောင့်သည်အတော်အတန်ရှေးရိုးစွဲဆန်သည်။ ၎င်း၏တီထွင်သူများသည်ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးများထက်တည်ငြိမ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သောကြောင့်၎င်းကို xfce စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူတိုးတက်နိုင်သည်။
၎င်းသည် Panel များကိုလွယ်ကူစွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ဖြစ်ရပ်အသံများ၏ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပြီး၎င်းတွင်ပြည့်စုံသောအသုံးပြုသူလက်စွဲရှိသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် LiveUSB ကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
AMD, Nvidia နှင့် Broadcom Wi-Fi ချစ်ပ်များကိုအသုံးပြုသူများသည်လွယ်ကူစွာအနားယူသင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုသို့သော hardware များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် installers များကိုပေါင်းစည်းရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။
16gb Ram ရှိသည့် virtual machine တွင် MX-2 ၏စုစုပေါင်း boot သည် ၂၆ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။ HTOP ၏အဆိုအရ XFCE Desktop ပါ ၀ င်သည့် Xubuntu ကဲ့သို့မှတ်ဉာဏ်သုံးစွဲမှုသည်အနည်းငယ်အောက်တွင်ရှိသည်။ System startup သည် shutdown ကဲ့သို့မြန်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအပိုင်း၌ပြောစရာမရှိတော့ပါ။
MX-16 «သွင်ပြင်လက္ခဏာများ» application များ
ဒီ distro ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအဓိက application များသည်အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
Browser: Firefox ကို 50.0.2
ဗွီဒီယိုဖွင့်စက်: VLC က 2.2.4
ဂီတမန်နေဂျာ / Player: ကလီမန်တိုင်း ၁.၃.၁
မေးလ်ဖောက်သည် Thunderbird ကို 45.5.1
ရုံးအလိုအလျောက် - LibreOffice 5.2.2
နောက်သို့ LuckyBackup ၀.၄.၈
လုံခြုံရေး: စကားဝှက်များနှင့်သော့ချက်များ 3.14.0
ဂိတ်: Xfce4 Terminal ကို 0.6.2
တိုက်ရိုက်: Live USB၊ Remaster ကိရိယာ၊ Snapshot ကိုဖန်တီးပါ။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု: Boot ပြင်ဆင်ခြင်း၊ Flash manager၊ Menu တည်းဖြတ်သူ၊ သုံးစွဲသူမန်နေဂျာ။
Installers နှင့် Software မန်နေဂျာများ Broadcom မန်နေဂျာ၊ Codecs installer၊ ပုံမှန်ကြည့်ပါ၊ Panel ပုံစံ၊ အသံရွေးချယ်ပါ၊ အသံစနစ်၊ ကြိုဆိုပါတယ်၊ Apt notifier၊ Apt GPG ကိုစစ်ဆေးပါ၊ Debian Backports installer၊ Package ထည့်သွင်းသူ၊ Repo manager, Test Repo installer
အသုံးအဆောင်များ: အစုရှယ်ယာများကိုရှာပါ၊ အသုံးပြုသူပြောင်းပါ၊
ဂရပ်ဖစ်: ImageMagik, Inkscape, စသဖြင့်
Network မှ: Skype၊ Dropbox စသည်တို့
ရုံးအလိုအလျောက်: GnuCash, Adobe Reader, Caliber စသည်တို့
စံနစ်: KDE, LXDE, MATE စသည်
audio: Audacity၊ DeaDBeeF, Pithos စသဖြင့်
ဗီဒီယို: DVDStyler, MPlayer, OpenShot, စသဖြင့်
16-bit နှင့် 32-bit နှစ်ခုလုံးအတွက် MX-64 ISOs များကိုသင် download လုပ်နိုင်သည် ဒီမှာ။ ၎င်းကို CD / DVD (သို့) USB ဖြင့်ကူးယူနိုင်တယ်။
သင်၏ usb ပေါ်တွင် ISO ကိုမည်သို့မီးရှို့ရမည်ကိုမသိလျှင်ဤဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် LiveUSB ကို terminal နှင့်ဖန်တီးပါ
MX Linux 16 တွင်နိဂုံးချုပ်သည် "အသွင်ပြောင်း"
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါဒီ distro အမြင်အာရုံနှစ်သက်, အတော်လေးအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ် tools များနှင့်အတူရှာပါ။ ဝေးကနေတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာရှိသည်ဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်း စနစ်ကျသော၊ Debian (တည်ငြိမ်သော) ကိုအသုံးပြုသောအချိန်၌ application အချို့သည်မပြည့်စုံသေးပါ။ သို့သော်အနည်းဆုံး browser နှင့် LibreOffice သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လျှင်၎င်းကိုသတိပြုသင့်သည်။
အလားတူပင်ကစီးရီးရှိပါတယ် MX ကိရိယာများ သူတို့ကြိုးစားသင့်သည်၊ သူတို့၏အလွန်စိတ်ထိခိုက်သောတပ်ဆင်မှုကကျွန်ုပ်အားမည်သည့်အကဲဖြတ်ချက်တွင်မဆိုအချက်များစွာထပ်ထည့်သည်။
နိဂုံးချုပ်အတွက်မင်းလိုချင်ရင် အတော်လေးပေါ့ပေမယ့်အလွန်အလုပ်လုပ်တဲ့ Linux ကိုဖြန့်ဖြူး ငါမင်းကိုအကြံပေးလိုပါတယ် MX Linux 16 ကိုစမ်းပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်သည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပြီးအမြင်အာရုံသည်လှပပြီးထိရောက်မှုရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » MX Linux - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကိရိယာများဖြင့်လျင်မြန်။ ဖော်ရွေသော distro
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ကျွန်တော်တစ်ပတ်လုံးအတူနေခဲ့ပြီး ၀ မ်းသာအားရ၊
အံ့အားသင့်စရာကောင်းပြီးအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် 64 bit ကိုအသုံးပြုသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအဓိကသုံးထားတာကြောင့်ဖြစ်ပြီး 32 3.16. XNUMX ကိုသုံးသောကြောင့် Bluetooth နှင့်ပြproblemနာရှိနေသည်။ Excellent က distro ။
၎င်းသည်ယေဘုယျအသုံးပြုမှုဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ပထမဆုံး 32-bit ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး PAE မဟုတ်သောတိုက်ရိုက်ပါဝင်သည်။ ထိုတစ်ခုတည်းအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လေးစားမှုနှင့်ထိုက်တန်စွာစမ်းသပ်ခံထိုက်သည်။
ငါဘာအမှားကျူးလွန်မိလဲမသိဘူး၊ 32 bit version ကို uefi mode ထဲထည့်လိုက်တယ်။ အဲဒါကတော့လက်တော့ပ်ကပံ့ပိုးပေးတယ်၊ ပြီးပြီ။ installation ပြီးသွားပြီ။ operating system ကိုစဖွင့်တဲ့အခါမှာအဝါရောင်စာလုံးတွေနဲ့ကျန်နေတယ်။
Lobo သင်ဤနှစ်ခုလုံးကိုလုပ်သင့်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်ငါပုံလုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်သင့်အား uefi (သို့) mode နှစ်ခုလုံးကိုရွေးနိုင်သည်။ မည်သို့ပင် 32 သို့မဟုတ် 64 မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မူအရ၊ အရေးမကြီးပါ၊ boot နှင့် installation လုပ်သောအခါအရင်းအမြစ်များကိုအနည်းနှင့်အများသုံးသောအခါနောက်ပိုင်းတွင်၎င်းသည်အရေးကြီးသည်။
ငါ 32-bit ဗားရှင်းကိုကြိုးစားကြည့်ပြီး ၄ င်းသည် AMD Phenom X4 CPUs ၄ ခုလုံးကိုစနစ်ကျဆင်းစေသည့်နည်းဖြင့်ညှစ်ထုတ်လိုက်သည်။ ပြီးရင် 4-bit version ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်တဲ့ system ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ သူက xubuntu နဲ့ linux mint xfce ထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ အဲဒါကငါ linuxero ကိုအရမ်းချစ်တယ်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် hardware တစ်ခုစီသည်ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Linux တွင် iTunes အသုံးပြုနည်း
Discord ကို Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း